तौल बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? नखानुहोस् यी ७ खानेकुराहरु… « Pariwartan Khabar
तौल बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? नखानुहोस् यी ७ खानेकुराहरु…
1 October, 2020 11:58 am
के तपाई तौल बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि व्यायामका साथै खानेकुरामा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । हामी आफूलाई मनपर्ने खाना भेट्यौँ भने स्वास्थ्यको ख्याल नै नगरी मज्जाले खान्छौँ, अनि फेरि मोटो भयौँ भनेर पनि चिन्ता लिन्छौँ ।
स्वस्थ र फूर्तिलो राख्नको लागि खानेकुरामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । शरीरमा अनावश्यक मासु र बोसो लाग्न नदिन यस्ता ७ खानेकुरा कहिल्यै नखानुहोस् ।
चिप्स वा फ्रेन्च फ्राइज
आलु सबैलाई निकै मनपर्ने तरकारी हो । आलुलाई जसरी पकाएपनि मिठो हुन्छ । अझ तेलमा तारेर चिप्स बनाएर खादाँ त त्यसको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ । तर यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ । धेरै तेल हालेर फ्राइ गरेको आलु खादाँ तौल बढ्नुको साथै क्यान्सर रोग समेत लाग्न सक्छ ।
गर्मीमा धेरैलाई कोल्ड ड्रिंक्स खान मनपर्छ । तर सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स जस्ता पेयपदार्थ स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन । यसले भोक धेरै लगाउनुको साथै तौल पनि बढाउँछ ।
तौल घटाउनु छ भने केक, कुकीज खानुहुदैँन । यो पनि तौल बढाउने खानेकुरामध्येको एउटा हो । यसका साथै स्वास्थ्यका लागि पनि केक, कुकीज राम्रो होइन ।
प्याकेटमा भएको फ्रुट जुस
प्याकेटमा भएको फ्रुट जुस हामी निकै मिठो मानेर खाने गर्छौ । तर त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे भने हामी सोच्दैनौँ । यस्ता जुसहरु रिफाइन्ड तरिकाबाट बनाइन्छ । त्यसैले यसमा प्रिजर्भेटिभ्स पनि मिसाइन्छ । जसले शरीरमा कुनै पनि फाइदा गर्दैन ।
तौल धेरै बढिरहेको छ भने चकलेट धेरै खानुहुदैँन । चकलेटमा चिनी र क्यालोरिजको मात्रा बढी हुन्छ जसले तौल बढाउँछ । तौल बढु्नुका साथै चकलेट धेरै खादाँ रक्तचाप बढ्ने सम्भावना पनि प्रवल हुन्छ ।